Nicholas Kay iyo Madoobe Nuunow ka wada hadlay xalka Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nicholas Kay iyo Madoobe Nuunow ka wada hadlay xalka Baydhabo
Muqdisho – Mareeg.com: Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, UNSOM ayaa kulan la qaatay siyaasiga Madoobe Nuunow Maxamed oo sheegta inuu yahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee 6-da gobol, kaasoo khilaaf badan keenay.
Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa sheegay iney kulan la qaateen Madoobe Nuunow Maxamed, islamarkaana kala hadleen sidii uu tageeri lahaa qorshaha nabadeed uu ee wado Raysulwasaaraha Soomaaliya, C/weli Sheekh Maxamed ee ku saabsan xal u raadinta Baydhabo.
“Waxaaan kulan wanaagsan la yeelanay Madoobe Nuunow, si uu u taageero wada xaajoodka uu hormuudka u yahay Raysulwasaare C/weli Sheekh Maxamed, kulanka aan la qaatana aad ayuu ii dhiiri geliuyey” ayu yiri Nicholas Kay oo wareysi siiyey Bar-kulan.
Danjire Kay ayaa sheegay in sidoo kale kulanka looga wada hadlay sidii maamul KMG ah loogu sameyn lahaa gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Kay oo la weydiiyey inaan dowladda Soomaaliya aqoonsaneyn maamulka 6-da gobol ee Madoobe Nuunow sheeganayo inuu madxweyne u yahay ayaa ku jawaabay in dowladda Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay aqoonsan yihiin maamul kasta ee ku dhisan sida uu qabo dastuurka Soomaaliya.
Magaalada Baydhabo ayaa lagu dhisay labo maamul goboleed oo iska soo horjeeda, waxaana dowladda Soomaaliya dedaal ku bixisay sidii loo mideyn lahaa labadaas maamul, hse ahaate weli guul kama gaarin.
Alshabaab: Dagaalka waxaan u rarnay Kenya